Kubadaha Kubadaha Kubadda Cagta, Shiinaha Warshadaha Kubbadda Valve, Wareega Goobaha - Mustaqbalka
Future Madax Ball Co., Ltd., oo la aasaasay 2004, oo ku taal magaalada caanka ah ee Wenzhou, Gobolka Zhejiang. Waxaan leenahay khibrad aad u wanaagsan oo soo saarista iyo dhoofinta BALLS & KURSIYO tayo sare leh oo loogu talagalay kubbadaha.
Adkaysiga iyo takhasusku wuxuu naga dhigayaa shirkad si fiican u qalabeysan oo maamul wanaagsan leh. Waxaan haynaa in ka badan 100 shaqaale iyo 20 shaqaale farsamo oo sare. Iyada oo dadaalka la-shaqeeyayaasheena, waxaa naloo aqoonsaday nidaamka tayada ISO9001-2015.
Aqoon isweydaarsiga, wuxuu ka kooban yahay aagga 8000㎡ ， wuxuu leeyahay qiyaastii 100 nooc oo noocyo kala duwan ah oo qalab casri ah, oo ay ku jiraan lathes-ka toosan ee CNC, xarumaha mashiinnada jiifka ah iyo wixii la mid ah. , Falanqeeyaha muuqaalka sawirada la qaadan karo iyo iwm,
Waxaan soo saari karnaa kubbado loo habeeyay iyadoo loo eegayo sawirada macmiilka. Wax soo saarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: kubbadda trunnion, kubbadda dul sabbaysa, kubbadda jirridda, T-type / L-type 3-way kubbadda iyo birta kubbadda birta & kursiga waxay u dhexeeyeen 3/8 inch ilaa 48 inch (DN10 ~ DN1200) laga bilaabo 150LB illaa 2500LB.
16 Sano Jaahilnimo
In ka badan 30 alaabood
In ka badan 15 Milyan
Kubadaha birta ah iyo xirmooyinka giraanta kursiga
Birta illaa Birta Kubadda an ...
Kubadda waalka birta ah iyo kursiga ayaa ah cambaareyn ...
Magaca badeecada: Giraanta fadhiga Cabbirka: 1/2 "~ 32" Cadaadis ...
Magaca badeecada ring Giraanta fadhiga Cabbirka ： NPS3 / 4 ”~ 30 & ...